दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवारको जित सुनिश्चित भएको छ।
तुलसीपुर उपमहानगरमा एमालेका उम्मेदवार मतान्तर बढाउँदै दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवारले मतान्तर बढाउँदै लगेका छन्।
तुलसीपुरको मेयर र उपमेयरमा एमालेको अग्रता कायमै दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवारले मतान्तर बढाउँदै लगेका छन्।
बुटवलको मेयरमा पाण्डे र उपमेयरमा अर्याल निर्वाचित बुटवल उपमहानगरपालिकाको मेयरमा खेलराज पाण्डे र उपमेयरमा सावित्रादेवी अर्याल निर्वाचित भएका छन्।
तुलसीपुर उपमहानगरमा एमालेको अग्रता कायमै दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवारले अग्रता कायमै राखेका छन्।
नेपालगञ्जको मेयरमा कांग्रेसका विष्ट र उपमेयरमा जसपाका राई विजयी बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका प्रशान्त विष्ट र उपमेयरमा जनता समाजवादी पार्टीका कमरुद्दीन राई विजयी भएका छन्।
नेपालगञ्जको मेयरमा गठबन्धनका विष्ट जित नजिक, करीब ११ हजार मतले अगाडि बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मेयरमा गठबन्धन तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका प्रशान्त विष्ट जितको नजिक पुगेका छन्।
तुलसीपुरको मेयरमा गठबन्धन र उपमेयरमा एमाले अगाडि दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा गठबन्धन र उपमेयरमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवारले अग्रता लिइरहेका छन्।
नेपालगञ्जमा गठबन्धनका उम्मेदवार फराकिलो मतान्तर सहित अगाडि बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनका उम्मेदवार फराकिलो मतान्तर सहित अगाडि छन्।
घोराहीमा गठबन्धनलाई हराउँदै एमाले विजयी दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार विजयी भएका छन्। मेयरमा नरुलाल चौधरी र उपमेयरमा हुमा डिसी विजयी भएका हुन्।
घोराहीमा चौधरी ५ हजार मतले अगाडि, १० हजार गन्न बाँकी घोराही उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार नरुलाल चौधरीले फराकिलो अग्रता बनाएका छन्।
घोराहीमा नरुलालको अग्रता कायमै‚ हेमराज ४७५८ मतले पछाडि दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार नरुलाल चौधरीले चार हजार ७५८ मतान्तर सहित अग्रता कायमै राखेका छन्।
घोराहीमा एमालेका नरुलाल ३ हजार मतले अगाडि
समाचार सन्तोष दहित
दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयर पदमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवारले अग्रता बढाउँदै लगेका छन्।
नेपालगञ्जमा भाइले दाइलाई हराए
नेपालञ्गञ्ज उपमहानगरपालिका-१ को वडाध्यक्षमा दाइलाई हराउँदै भाइ निर्वाचित भएका छन्।
प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीसँग टेलिफोनपछि छुटे बास्तोला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग टेलिफोन वार्ता गरेपछि नेकपा (बहुमत) का संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला छुटेका छन्।
बुवाको मृत्यु भएपछि छोराले दिए वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-१७ मा वडाध्यक्षका उम्मेदवार लबरू चौधरीको मृत्यु भएपछि उनका छोरा प्रदीप चौधरीले उम्मेदवारी दिएका छन्।
बुटवलमा कसको पल्ला भारी? नेकपा (एमाले)को गढ मानिएको बुटवल उपमहानगरमा गठबन्धनका उम्मेदवारसँग रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।
धवलशमशेरको गढमा जुध्दै कांग्रेस र एमाले राप्रपा महामन्त्री धवलशमशेर राणाले गत निर्वाचनमा फराकिलो अन्तरले जितेको नेपालगञ्ज उपमहानगरमा यस पटक भने कांग्रेस र एमाले पनि कडा प्रतिस्पर्धामा छन्।
घोराही उपमहानगरमा कसले मार्ला बाजी? वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि घोराही उपमहानगरपालिकाको मेयरमा १४ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।
नेपालगञ्जमा दाजुभाइबीच प्रतिस्पर्धा, आमा भन्छिन्- कसलाई भोट दिऊँ? स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका-१ का सहोदर दाजुभाइ चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। दुई छोरा फरक फरक पार्टीबाट उम्मेदवार बनेपछि आमा भने कसलाई भोट दिने भन्ने दोधारमा परेको बताउँछिन्।